China na-adịgide ogidi kachasị mkpa nke Global Car Industry Report
Ndị isi ụgbọ ala Germany atọ bụ Volkswagen, BMW na Daimler ritere uru na "oke oke" site na mgbake ahịa na China ka ahịa Q3 ha na China mụbara site na pasent itoolu ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga, EY kwuru. BERLIN, Dec. 23 (Xinhua) - Ahịa ndị China na-amalite ọzọ pr ...
China na-agbanwe tarifu n'ahịa ndị a na-ebubata
China ga-agbanwe tarifu mbubata na ngwaahịa dị iche iche bido na Jenụwarị 1, 2021 iji kwado ịkwalite usoro mmepe ọhụụ na ịkwalite mmepe dị elu, dị ka ifflọ Ọrụ Na-ahụ Maka Omenala nke Ọchịchị State. Tarifaa nke na-ebubata ngwa ahịa dị ala karịa nke a kwadoro karịa ...
China Iji Kwe Ka Akụrụngwa Akụrụngwa Bata Na-esote Afọ
Bido n’afọ 2021, China ga-ekwe ka ibubata igwe na igwe eji arụ ọrụ nke na-agbaso ọkọlọtọ mba ebe ọ bụ na ha anaghị emepụta ihe mkpofu siri ike, ndị ọchịchị kwuru. E kwupụtara ihe ndị siri ike na njikwa mbubata nke ígwè na ihe ígwè, dị ka ọkwa ...
France kwuputara atụmatụ 8-Bln-Euro iji zọpụta ụlọ ọrụ ụgbọ ala na-arịa ọrịa
Onye isi ala French bụ Emmanuel Macron na Tuesday kpughere atụmatụ nnapụta atụmatụ ijeri euro asatọ (8.78 ijeri US) iji nyere aka na mgbake nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala nke ụlọ nwere nnukwu nsogbu site na mkpọchi mgbochi coronavirus. Atụmatụ a lekwasịrị anya na imepụta ụgbọ ala na-eme ka gburugburu ebe obibi. “Sta ...